Shareecadu Makala Taqaan
Shariif & Shaydaan
La jiifiyaana bannaan
Sida lawada ogsoon yahayba sharecada islaamku waa mid ku dhisan caddaalad u wada dhaxaysa makhluuqa Alle SW. Sidaa darteed shareecada akteeda kama shaqayso wax layiraahdo la jiifiyaana bannaan iyo jaantaa rogan.
Haddii maanta uu shariifkii maxkamadaha uu ogolaaday in ciidamo aan kala sooc lahayn la keeno wadanka, shalayna ay gaalnimo ahayd markii dowlad ku sheega iyo baarlamaankeeda ay lahayeen waxaa loo codeeyay in lakeeno ciidamo aan kala lahayn saf hore iyo saf danbe uuna ku dhawaaqay shariifka hadda isku magacaabay baarlamaanka xorta ah. Taa macnaheedu sow ma’ha lajiifiyaana banaantii aan dusha kusoo xusay.
Sidaa darteed haddii aad ku adkaysataan mowqifkaa baadilka iyo gaalnimada ku dhisan shaki waxaan lahayn in xukumka shareecada aad u siman tihiin idinka hadda raba in aad gaalo wadanka kusoo hogaamisaan iyo kuwii hore ee ilaa iyo hadda xal loo la’ yahay dhibaatadii ka dhalatay soo gelintii ay gaalada wadanka soo geliyeen.
Waxaan walaalaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaarsiin lahaa in mar walba oo guushu soo dhawaataba aadan ogolaan in si sahal ah aad uga tanaasushaan mirihii ka dhashay halgankii lala galay gaalada dibna aan laidinku celin god dheer oo laguugu maquuniyo dastuur ku dhisan cilmaaniyad kasoo burqata kufri iyo ilxaad.
Qofka wadan islaam kusoo hogaamiyo gaalada xukumkiisa inuusan shariif iyo shaydaan kala lahayn kitaabka aan ka qoray isaga oo kooban hoosta ka aqriso.